Achọ olu Google nwere ọgụgụ isi karịa na-echere anyị | Androidsis
Nchọgharị olu Google ga-eji ọnọdụ gị ghọta ọnọdụ nke ajụjụ gị
Na Google I / O 2015 anyị nwere ohere gbaa akaebe otu n'ime ozi kachasị mma maka Google Ugbu a. Nke a bụ ihe ga-ekwe omume na Google Ugbu a ghọtara ọnọdụ nke ajụjụ ndị anyị na-ajụ site na igwe okwu nke ngwaọrụ mkpanaka anyị. Nke a na-enye ohere, na mbụ, na anyị ekwesịghị ịbụ ka o doro anya na ajụjụ, na Ya mere na Google bụ ihe "nwere ọgụgụ isi".
Nke ahụ bụ, Google Ugbu a ga-ewebata ngwa ngwa ike Ghọta ọnọdụ ajụjụ ndị a ma tụlee ihe ebe ahụ dị ebe i no. Otu ihe atụ dị mfe ma ọ bụrụ na anyị nọ n’ihu ụlọ ebe ngosi nka ụfọdụ, nke ajụjụ ezi uche dị na ya ga-abụ «Gịnị ka a na-akpọ ụlọ ihe nka nka? Google Ugbu a "ga-eche" na ị pụtara ụlọ ihe ngosi nka ị nwere ebe ahụ n'ihu gị mgbe ị na-enyocha ọnọdụ gị ma na-enye ozi ziri ezi n'egbughị oge ma mee ka o doo anya na anyị na-arụ ọrụ na "mmadụ na ọgụgụ isi" akụrụngwa.
1 Google "mara ihe" ugbu a
1.1 Ndepụta nke iwu ọhụrụ
2 Ọnọdụ na gburugburu ya
Google "mara ihe" ugbu a
otú ọhụrụ "anwansi aghụghọ" Google bụ maka nyocha olu nke Google Ugbu a, ebe ọ bụ na ngwaọrụ ahụ ga-ama ọnọdụ gị, yabụ ga-enye ozi ka mma banyere ebe ahụ na-enweghị ike ịkọwapụta ihe ọ bụ.
Nyocha Google site na olu ugbu a ga-anabata okwu dịka "ebe a" na "ebe a" kama iji aha ndị ziri ezi na njirimara, na eziokwu, ọ na-a bit arọ mgbe na-ekwurịta okwu anyị mebere olu nnyemaaka. Kedu ihe a ga-eburu n'uche mgbe niile na anyị ga-adị nso na ebe a na-ekwu maka ya, yabụ ọ bụrụ na ị nọ n'ihu Statue of Liberty na New York, na-ajụ "Gịnị bụ ịdị elu nke ihe ncheta a?", Google ga-egosi ị data ke jiffy.
Ndepụta nke iwu ọhụrụ
Gịnị bụ ihe ngosi nka?
Kedu mgbe ụlọ nri na-emeghe?
Ogologo ya hà? (ịnọ n'akụkụ ụlọ)
Kedu mgbe e wuru ya? (maka ihe ncheta)
Gịnị bụ aha ụka a?
Kedu nọmba ekwentị maka ahịa ọgwụ a?
Ọnọdụ na gburugburu ya
Ihe gbara ya gburugburu nwere ike inyere aka nke ukwuu site n'ọnọdụ na ebe anyị nọ. Ọtụtụ n'ime ajụjụ ndị a metụtara nke a na Google maara ya, nke mere o jiri nwee ike ịchọta usoro a iji nye ọgụgụ isi ka ukwuu na nyocha olu ya.
N'ebe a, anyị na-anọgide na-ahụ otú Google chọrọ Google Ugbu a ịghọ otu ụbọchị zuru oke olu nnyemaaka na anyị nwere ike isoro ya kparịta ụka dịka a ga - asị na anyị bụ onye protagonist nke Her, ihe nkiri a na-eme na Joaquin Phoenix nke onye isi ya nwere ịhụnanya na sistemụ arụmọrụ ya.
Mgbe a ka nwere ọtụtụ ụzọ ịgaN'oge anyị ga-echere ka Google kpebie ịgbatị ọrụ ọhụrụ a na njinchọ ọchụchọ ya ma yabụ anyị nwere ike ịchekwa okwu mgbe anyị na onye enyemaka olu anyị na-ekwurịta okwu nke ga-anọ ebe ahụ na-eche anyị oge niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nchọgharị olu Google ga-eji ọnọdụ gị ghọta ọnọdụ nke ajụjụ gị
Samsung na-ebipụta ọkwa ọhụụ banyere Samsung Galaxy S6 Edge